Heino Yakakura Rondedzero ye Instagram Nyaya Mienzaniso uye Nyaya Dzidziso | Martech Zone
Takagovana chinyorwa chakapfuura, Zvese zvaunoda Kuti Uzive Nezve Instagram Nhau, asi mabhenji ari kuvashandisa sei kutyaira kushambadzira nekutengesa? Sekureva kwe #Instagram, 1 mu3 yenyaya dzinoonekwa zvakanyanya ndeye kubva kumabhizinesi
Instagram Nyaya Statistics:
Mamirioni mazana matatu evashandisi vanoshandisa nesimba nyaya zuva nezuva pa Instagram.
Vanopfuura makumi mashanu muzana emabhizinesi pa Instagram vakaita Instagram nyaya.
Vanopfuura 1/3 vevashandisi ve Instagram vanoona Instagram nyaya mazuva ese.
20% yenyaya dzakatumirwa nemabhizinesi dzakakonzera kudyidzana kwakananga nemushandisi.
Miriyoni imwe vanoshambadzira vanoshaya vanokwanisa kuwana Instagram Nhau Ads
Mabhizinesi akawedzera kubatanidzwa neinenge 20% pavanogashira mushandi kana vanokurudzira pane yavo Instagram Nyaya kwemazuva mashoma.
Saka mabhenji ari kuisa sei Instagram Stories kuvashandira? Hedzino nzira nomwe dzemabrugwa dziri kushandisa nyaya kuwedzera kuziva, kuita, uye kutengesa nevashandisi ve Instagram:
Chigadzirwa Kusimudzira - 36% yenyaya dzese dzinosimudzira zvakananga kutengeswa kwechigadzirwa kana sevhisi.
Kutarisa Kwemukati - 22% yenyaya dzese dzinopa mukana wekuwana zvemukati zvisingaonekwe chero kumwe kunhu.
Kufuridzira Kutora - 14% yenyaya dzese anoshandisa Anokurudzira kukurudzira chigadzirwa kana sevhisi.
Live Live Event - 10% yenyaya dzese ndedze chiitiko chaicho chiri kuitika.
How To - 5% yenyaya dzese sei mavhidhiyo.
Fani Zvemukati - 4% yenyaya dzese dzinosanganisira wongororo uye humbowo hwevatengi.
Makwikwi - 2% yenyaya dzese Instagram nyaya ndedze zvemakwikwi emukati.
mwe - 7% ye Instagram nyaya ndedzimwe nyaya mhando.
99firms akagadzira iyi inoshamisa infographic, Mashandisiro Anoita Mabhizinesi Nhau dze Instagram - Zvidzidzo makumi matatu, saka unogona kudzidza zvakawanda nezve mashandisiro emamwe mabhizimusi Nhau kupa izwi nehunhu kuchiratidzo chavo. Mhando dzinosanganisira Mercedes-Benz, DriveNow, Enel, AirPlay, Ticket.com, Country Road, Tokopedia, HiSmile, McDonald's, Asos, CoverGirl, Lego, Michael Kors, E! Nhau, Maybelline, Twitter, Nordstrom Rack, Brunch Vakomana, NASA, Buffer, Airbnb, MSNBC, Uyezve, Glossier, IBM, Chikafu Chose, Spy Valley Wines, MAC Zvizoro, Brit + Co, National Geographic, Reebok, Adidas, Aldo, Ulta , Sephora, Lowe's, American Eagle, Old Navy, uye Gap.
Tags: 99firmsAdidasAirbnbAirPlayAldoAmerican EagleASOSBrit + CoBrunch VakomanabufferZvidzidzo zvemhosvanyaya yokudzidzaNyika RoadCoverGirlDhiraivhaZvinoE! NhauEnelUyezveGapGlossierHiSmileIBMinstagram storiesinstagram nyayaLegolowe'sMAC MafutaMaybellineMcDonald raMwariMercedes Benzmichael korsMSNBCNASANational GeographicNordstrom RackOld NavyreeboksephoraSpy Valley WinesTikiti.comTokopediaTwitterUltaKudya Kwese